Buy Sq 11 mini dv camera (25,000Ks) in ကမာရွတ် on ipivi.com
Hd photo နဲ. video များ ရိုက်နိုင်မယ့် hd mini camera လေးကို
Internal 32GB အထိ စိုက်ထည့်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Product Size 23 * 23 * 23
အားသွင်းပြီး ၁နာရီလောက် ဆက်တိုက် ရိုက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကြာကြာ ရိုက်ချင်ရင် powerbank နဲ. တွဲထားလိုက်ပါ။
Tv နဲ. ကြည့်လို.ရမယ့် AV ကြိုး ပါပါမယ်။
အမည်: Sq 11 mini dv camera